काठमाडौँ — राजधानीमा दुई महिनामा डेढ सयभन्दा बढी व्यक्तिमा प्रयोगशाला प्रमाणित स्वाइन फ्लु देखिएको छ । चिकित्सकीय भाषामा यसलाई मौसमी इन्फ्लुएन्जा (रुघाखोकी) अन्तर्गत रहेको ‘इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१’ भनिन्छ ।
चिकित्सकहरूले सरकारी तथ्यांकभन्दा वास्तविक स्थिति झन् जटिल रहेको दाबी गरेका छन् ।
राजधानीमा अहिले स्वाइन फ्लु प्रकोपकै रूपमा देखिएकाले यसबाट प्रभावित भएर जटिल स्वास्थ्य अवस्थामा पुग्ने र मृत्यु हुने घटनामा वृद्घि भएको छ । ‘हामीकहाँ आइपुग्नेमध्ये करिब २५ प्रतिशत बिरामी रुघाखोकी तथा छातीको संक्रमणका हुन्,’ ओम अस्पतालका निर्देशक डा. केपी देवकोटाले भने, ‘आज (सोमबार) स्वाइन फ्लुले मृत्यु भएकी महिलामा यसअघि कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या थिएन ।’
गत पुस १७ देखि राजधानीमा स्वाइन फ्लु बढेको देखिएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका निर्देशक डा. हरिशचन्द्र उप्रेती स्विकार्छन् । उनका अनुसार हाल मौसमी रुघाखोकीको पहिचान गर्न घाँटीको र्‍यालको नमुना दिनेमध्ये करिब आधा जतिमा इन्फ्लुएन्जा ए–एच१एन१ (स्वाइन फ्लु) देखिएको छ ।
‘जनमानसले सामान्य रुघाखोकी ठानेर यसमा खासै चासो दिएका छैनन्, रुघाखोकीलाई सामान्य रूपमा नलिऊँ,’ डा. थापाले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलाई संक्रमणको जटिलता थाहा भएर चाँडै भर्ना भएर उपचार प्रक्रियामा गएँ, संक्रमण धेरै बढेपछि उपचार प्रक्रियामा जाँदा जटिलता थपिन्छ ।’ उनका अनुसार समस्या भएकामा छिटो एन्टिभाइरल औषधिले उपचार गर्दा निको हुने भए पनि ढिलो गरी उपचार प्रक्रिया सुरु गर्दा ‘मल्टिअर्गेन फेल्योर’ ले मृत्यु हुने सम्भावना रहन्छ । हाल ग्रान्डीमा समेत इन्फ्लुएन्जाका धेरै बिरामी आइरहेको जनाउँदै डा. थापाले भने, ‘हामीकहाँ आएका स्वाइन फ्लुका बिरामीमध्ये कडा संक्रमण देखिएकाको मृत्युसमेत भएको छ ।’
स्वाइन फ्लुको जोखिम समूहचिकित्सकहरूका अनुसार दम, श्वासप्रश्वास रोगको समस्या भएकालाई स्वाइन फ्लु (मौसमी रुघाखोकी) को संक्रमण हुने खतरा बढी हुन्छ । यस्तै मधुमेह, मुटु, कलेजो र स्नायु रोग भएका समेत संक्रमित हुने उच्च जोखिममा रहन्छन् ।
गर्भवती, बूढापाका र ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा यो संक्रमणको खतरा अन्यको दाँजोमा बढी हुन्छ । क्यान्सरको उपचार गराइरहेका, अंग प्रत्यारोपण गराएका, मोटोपनाको समस्या भएका, एचआईभी/एड्स वा अन्य कारणले रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकाहरू पनि स्वाइनको उच्च जोखिममा हुन्छन् । मदिरापान गर्ने पनि जोखिम समूहमा पर्छन् ।